Dadkii Ku Yaboohay Qaadhaanka Ka Soo Kabashada Abaaraha Oo La Baafinayo | Dhamays Media Group
Dadkii Ku Yaboohay Qaadhaanka Ka Soo Kabashada Abaaraha Oo La Baafinayo
Hargeysa (Dhamays) – Guddiga ka soo kabashada Abaaraha Somaliland, ayaa Shir-jaraa’id oo ay ku qabteen Magaalada Hargeysa Maanta waxay baaq ugu direen Shacabka Somaliland, gaar ahaan Dadkii hore u ballan-qaaday inay bixinayaan Lacago ay kaga qayb-qaadanayaan ka soo kabashada Abaaraha, laakiin aan illaa hadda intooda badani aanay bixinin.
Shirka Jaraa’id oo ay ka hadleen Wasiirrada Diinta iyo Awqaafta, Warfaafinta, Ganacsiga iyo Masuuliyiin ka socday Xisbiyada Qaranka, ayaa waxay ku sheegeen in inta badan Ganacsatada Dalka iyo Dadkii kale ee ballan-qaaday inay ka Qayb-qaadanayaan ka soo Kabashada Abaaruhu aanay illaa hadda soo bixinin Lacagihii ay ku yabooheen.
Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi oo ugu horreyn halkaa ka hadlay ayaa yidhi “Waxaanu baraarujinaynaa Dadkii Walaalaheen ahaa ee is qoray inay soo bixiyaan wixii ku qornaa, oo ay soo dhamaystiraan ballankii ay ILAAHAY iyo Ummadda la galeen. Guddigu hawshan waxay wadeen bishii Ramadaan iyo Bishii Shuwaal, intaaba waxay ku hawlanayd Guddigu soo ururinta Lacagtii lagu yaboohay ee Qaadhaanka ahayd, sidoo kale Waddamada jaarka ah ayay Guddigu Safarro ugu maqnaayeen.”
Wasiirka Warfaafinta Cismaan Cabdillaahi Saxar-diid (Caddaani) oo isaguna halkaa ka hadlay ayaa yidhi “Waxaanu Gacanta ku hayno iyo waxa soo ururi doona Mar dambe ayaanu soo sheegi doonaa, laakiin Bulshada Reer Somaliland waxaanu u sheegaynaa in hawshii Qayb badan ay dhiman tahay, markaa waxaanu ka codsanaynaa Dadkii Lacagta ku ballan-qaaday Maalintii Adduunka oo dhami dhegaysanayey (inay soo bixiyaan). Wixii Wasaaradaha Dawladda ku xidhnaa waa gebogabo. Laakiin, Dadkii Baayac-mushtarka ahaa ee Lacagaha isku qoray intii aan bixin inay si deg-deg ah ballan-qaadkoodii uga soo baxaan, intaanaan odhanin Hebel hebel weli muu bixinin.”
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Somaliland Cabdillaahi Ibraahim Habbane (Cabdillaahi-dheere), ayaa isaguna yidhi “Dadkii Xafladda dhexdeeda kaga yaboohay Lacagtu, ha soo shubaan Lacagta hadday Meesha kaga kacayeenna Magacyadooda ayaanu Xaadirin doonaa Maalin dhow.”
Masuuliyiin ka socday Xisbiyada WADDANI iyo UCID oo ka mid ah Guddiga ka soo kabashada Abaaraha oo iyaguna halkaa ka hadlay, ayaa diray baaq kaas la mid ah.
Ugu dambayn, Ururinta Qaadhaanka ka soo Kabashada Abaaraha ayaa Ganacsatada badhkood ka Caga-jiidayaan inay bixiyaan, maaddaama oo Dalku gelayo Doorashada Madaxtooyada, suurto-galna tahay in Lacagaha la ururiyey ama la ururin doono aan sidii la rabay wax loogu qabanin.
Halkan Hoose ka Daawo Hadallada Masuuliyiinta Arrintan ka hadlay oo dhan
Previous: Magaca Sarkaal Uu Maraykanku Sheegay In Laga Dilay Al-sbabaab
Next: CIRRO Oo Berri Iska Casilaya Guddoomiye-nimada Wakiillada